Diabetes – Page4– Healthy Life Journal
——-၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊——– Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသူဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သွေးပေါင်ကျတဲ့အခါ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. အပေါ်သွေးဖိအား ၉၀၊ အောက်သွေးဖိအား ၆၀ အောက်ကို သွေးပေါင်ကျတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့်...
အောက်ပါမေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားပေးထားပါတယ်။ Q. ရိုးရိုးလေးဘက်နာ ဖြစ်နေလို့ပါဗျ။ လက်တွေထုံကျင်ကိုက်ခဲနေလို့ပါ။ ပိုး ၃၀ဝ ရှိတယ်လို့တော့ ဆရာဝန်ပြောတယ်။ သိပ်မသက်သာလို့ အသက်က ၅၀ ပါဗျ။ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ ဖြေပေးပါအုံးဗျ။ A. ထုံကျဉ်တာပါရင် လေးဖက်နာမဟုတ်ပါဘူး။ လေးဖက်နာရောဂါဆိုတာက အဆစ်အမြစ်တွေ ရောင်ရမ်းနာကျင်ပြီး...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. ရာသီဥတုအကူးအပြောင်းတွေမှာ ဆီးချိုရှိသူတွေအနေနဲ့ အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးနဲ့ နာမကျန်းမှုတွေ မဖြစ်လွယ်အောင် ဘယ်လိုဂရုစိုက် နေထိုင်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆီးချိုသမားတိုင်း၊ အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အို ဆီးချိုသမားတွေက နဂိုကတည်းက ကိုယ်ခံအားနည်းကြတယ်။...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ကုသရာမှာ ထားရှိတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို သိပါရစေ ဆရာ။ A. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ကုသရာမှာ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို HbA1c က ၆ ဒသမ ၅-၇...
ဆီးချိုရောဂါရှိသူ ခွဲစိတ်ကုသရင် အနာမကျက်ဘူးဆိုတာ မှန်ပါသလား . . .
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ ခွဲစိတ်ကုသရင် အနာမကျက်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါကကော မှန်ပါသလား ဆရာ။ A. ဆီးချိုရှိရင် အနာမကျက်ဘူး၊ ဆီးချိုမရှိရင် ခွဲလို့မရဘူးဆိုတာလည်း အယူအဆမှားတစ်ခုပါ။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူကို ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေက ခွဲမယ်ဆိုရင်...
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) “လမ်းလျှောက်တတ်ရဲ့လား”လို့မေးလိုက်ရင် လမ်းပဲ . . လျှောက်တတ်တာပေါ့၊ လျှောက်တတ်လို့ပဲ နေ့တိုင်းသွားလာနေနိုင်တာ. . တစ်နေ့တစ်နေ့ လျှောက်နေတဲ့လမ်းတွေကို မနည်းလှဘူးရယ်လို့ လူအများဖြေကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ ရောဂါဝေဒနာတွေကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ဒီလို သာမန်နိစ္စဓူဝ လမ်းလျှောက်တတ်ရုံနဲ့တော့ မရပါဘူး။ အထူးသဖြင့်...
ယခင်တစ်ပတ်မှ အဆက် ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၂။ မိသားစုတွေကကော ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးခြင်းအပေါ် ဘယ်လိုအရေးပါသလဲ မိမိထံ သို့မဟုတ် မိမိရဲ့မိသားစုထံ ကျရောက်လာမယ့် အထက်ဖော်ပြပါ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူ ဆရာဝန်၊...
ယခင်တစ်ပတ်မှ အဆက် ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မိသားစုအပေါ် အထူးထိခိုက်စေတာကတော့ နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိသားစုဝင်ငွေ အဓိကရှာဖွေပေးသူရဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးရခြင်းက မိသားစုအပေါ် အထိခိုက်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နစ်နာမှုအများဆုံးသော နောက်ဆက်တွဲ ဆင့်ပွားရောဂါတွေကတော့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ လေငန်းရောဂါ၊ မျက်စိကွယ်ခြင်း၊...